पुस्तान्तरणको मार्ग कोर्दै रुपान्तरित कांग्रेस – Nepal Japan
एकराज पाठक १० पुष १७:३९
बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई अमेरिकी एबीसी टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा पत्रकार डेभिड मुइरले सोधे–अर्काे कार्यकालको राष्ट्रपति पदमा उठ्ने यहाँको योजना छ ? बाइडेनको जवाफ थियो–उठ्छु, किन नउठ्नु ? म अहिले जत्तिकै सक्रिय रहे भने अर्थात् स्वास्थ्यले साथ दियो भने उठ्छु ।
राष्ट्रपति बाइडेन अबका केही महिनामा ८० वर्षमा उक्लिने तयारीमा हुनुहुन्छ । त्यहाँको अर्काे निर्वाचन सन् २०२४ मा हुन्छ र त्यतिबेला उहाँले ८४ वर्ष लाग्ने तरखर गर्दै हुनुहोला । उता गत वर्षमात्र राजनीतिक जीवनबाट विश्राम लिएका मलेसियाका निवर्तमान प्रधानमन्त्री ९६ वर्षीय महाथीर मोहम्मदले ९४ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनुभयो ।
महाथीर मोहम्मद एक सामान्य राजनीतिकर्मी नभएर अहिलेको मलेसिया बनाउने व्यक्तिको नाम हो । त्यसबेला मेलेसिया र बाहिरी विश्वमा बहस नै भयो कि ९४ वर्षमा पनि किन मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा जानुप¥यो ? राजनीतिमा उमेरको बहस यसैगरी समयसमयमा देश विशेषमा उठ्छ र हराउँछ ।
पाँच वर्षअघिको तेह्रौँ महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका एक तिहाइजति महाधिवेशन प्रतिनिधि आएका थिए ३० वर्ष हाराहारीका । त्यसका कारण थियो कांग्रेसका भ्रातृ सङ्गठनको महाधिवेशन लामो समयदेखि रोकिनु । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल तरुण दललगायत सबैजसो भ्रातृ सङ्गठनका सम्मेलन, महाधिवेशन ठप्प भएपछि कांग्रेसका युवा कहाँ जाने ? पार्टीको महाधिवेशन सुरु भयो, उनीहरु पनि त्यतै लागे ।
चुनाव उठे, निर्वाचित भएर आए । यसरी अघिल्लो महाधिवेशनमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी युवा चुनिएर आए भनिएको थियो । यता नेपाली कांग्रेसमा सशक्त र युवा छविका नेता गगन थापाको महामन्त्री उठ्ने तयारी थियो । त्यस बेलाको नारा नै थियो–युवाले युवालाई छान्नुपर्छ, बुढापाकाको मात्र भनिएको कांग्रेसलाई अब युवा वर्गमा पुस्तान्तरण गर्दै लैजानुपर्छ । यही आशामा रहेका थापाको परिणाम भने त्यस्तो आएन । महामन्त्रीमा थापाले ६०० भन्दा केही बढी मत मात्र पाउनुभयो ।
त्यसो त उहाँहरुको उपस्थितिलाई मात्र नभएर आजसम्मको क्रियाशीलता र विचारलाई नै आवश्यक ठानेर महाधिवेशनले उहाँहरुलाई चुनेको हो । तर पनि अबका उहाँहरुका कार्यक्रमले मात्र पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्ने हो । यसैले नै पार्टीमा पुस्तान्तरणको मार्ग कोर्ने हो । माथि प्रस्तुत दुई विदेशी पाका राजनीतिज्ञको दृष्टान्तबाट राजनीतिमा उमेरको बार त्यति आवश्यक नपर्न पनि सक्छ । तर यी दृष्टान्तबाट पार्टीमा युवावर्गको आवश्यकतामाथि प्रश्न गर्नु यो आलेखको आशय भने होइन ।
बाइडेन र डोनाल्ड ट्रम्पका तुलनामा ४६ र ४७ वर्षमा राष्ट्रपति बनेका बिल क्लिन्टन र बाराक ओबामाका कार्यकाल राम्रो पक्कै थिए होलान् । अनि ९४ वर्षमा प्रधानमन्त्री हुँदाभन्दा सन् १९८० को दशकमा देशको कार्यकारी प्रमुख बनेर बलेसिया बनाएको महाथिर मोहम्मदको जाँगर पक्कै जोसिलै हुँदो हो । तर पनि वास्तविकता के हो भने उहाँहरुका फरक उमेरमा पनि उचित विचार बोकेकैले ती देश र कार्यकालले कोल्टे फेरेको भने पक्कै हो ।
कांग्रेसको भर्खरै सकिएको महाधिवेशनले यो दुवै सन्देश राम्रोसँग दिएको छ । किनभने कांग्रेसमा विचारका साथै परिपक्व र युवा उमेरलाई महाधिवेशनले नेतृत्वमा पु¥याइदिएको छ । पार्टीमा पाको उमेरका अनुभवी र परिपक्व शेरबहादुर देउवालाई मूल नेतृत्वमा पु¥याएको छ भने ठूलो सङ्ख्यामा युवा वर्गलाई पनि पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिसम्म पु¥याएको छ । यो हेर्दा लाग्छ समय समयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भन्ने गरेजस्तै ‘फ्युजन’ वास्तवमा कांग्रेस पार्टीभित्र भएको देखिएको छ । अर्कातर्फ पार्टीमा आफू निकटका एक सक्रिय र अनुभवी नेता डा प्रकाशशरण महतबाहेक सभापतिमा पुनःनिर्वाचित शेरबहादुर देउवालाई अपेक्षित नै परिणाम हात लागेको छ ।
यसका अतिरिक्त देउवाले कांग्रेसको सभापतिका रुपमा दोस्रो पटक आफूलाई अघि सार्दा सबै तहका निर्वाचनमा पार्टीलाई ठूलो पार्टी बनाउँछु भन्नुभएको छ । त्यसका लागि पनि उहाँलाई पार्टीका ६० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले अवसर दिएका हुन् र सभापतिमा निर्वाचित गरेका हुन् । आफ्नो यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि सभापति देउवा लाग्नुर्पेछ ।
उहाँले पार्टीलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनेगरी लाग्ने प्रण पनि गर्नुभएको छ । यसका अतिरिक्त उहाँले पार्टीका सबै भ्रातृ सङ्गठनको महाधिवेशन गर्ने तथा यथोचितरुपमा विभाग गठन गर्ने पनि प्रण गर्नुभएकाले यसलाई पनि उहाँको यो नयाँ कार्यकालले अवसरका रुपमा लिन सक्दछ । यी दुवै काम प्रधानमन्त्रीका रुपमा र पार्टी सभापतिका रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि देउवालाई अवसरका रुपमा रहनेछन् ।
पार्टीको १४औँ महाधिवेशनले पार्टीमा लामो समयसम्म काम गरेको परिपक्व तथा अनुभवी नेताका रुपमा देउवालाई सभापतिका रुपमा चयन गरेको छ भने उता ऊर्जाशील युवालाई पनि कार्यकारी पदमा ल्याएको छ ।
यसरी पुरानो र नयाँ पुस्तालाई महाधिवेशनले संयोजन गरिदिएको छ । यो संयोजनले चाहेमा पार्टी र देशका लागि पनि राम्रो परिणाम दिनसक्छ । कुनै पनि पार्टी सञ्चालन गर्नका लागि त्यहाँ अनुभवी व्यक्ति र नयाँ पुस्ताका उर्जाशील एवं सशक्त युवा शक्ति हुनु नितान्त जरुरी छ । त्यही संयोजनकारी भूमिकाको काम महाधिवेशन प्रतिनिधिले गरेका छन् । पुरानो भनिएको यो पार्टीमा नयाँ पुस्ताको उपस्थिति खोजिरहेका बेला त्यो पनि दिएको छ र पार्टी सञ्चालनका लागि पाका नेता पनि उपलब्ध गराएको छ ।